Kungani kubalulekile ukuthola ukuthi ukhona yini uMdali?
Kungani kubalulekile ukuthola ukuthi ukhona yini uMdali? Uma bukwanelisa ubufakazi bokuthi uNkulunkulu uMninimandla Onke ukhona, ungase uthande ukuhlola ubufakazi bokuthi iBhayibheli liphefumulelwe uNkulunkulu. Uma ukwethemba lokho okushiwo yiBhayibheli, ungase uzuze ngalezi zindlela ezilandelayo.
Ukuphila kwakho kuzoba nenjongo
IBHAYIBHELI LITHI: ‘[UNkulunkulu] wenza izinto ezinhle, eninika izimvula ezivela ezulwini nezinkathi ezinezithelo, enanelisa ngokudla, egcwalisa izinhliziyo zenu ngokwenama okukhulu.’​—IzEnzo 14:17.
LOKHO OKUKUSHOYO: Yonke into oyijabulelayo emhlabeni iyisipho esivela kuMdali. Uzozijabulela nakakhulu lezo zipho uma uthola ukuthi Lowo okuphe zona ukukhathalela kangakanani.
Uzothola isiqondiso ongasethemba esingakusiza nsuku zonke
IBHAYIBHELI LITHI: “Uyokuqonda okulungile, okunobulungisa nokufanele, yonke inkambo yokuhle.”​—IzAga 2:9.
LOKHO OKUKUSHOYO: Njengoba enguMdali wakho, uNkulunkulu uyazi ukuthi yini oyidingayo ukuze ujabule. Uma ufunda iBhayibheli, uzothola izinto eziningi ezingakusiza ekuphileni kwakho.
Uzothola izimpendulo zemibuzo yakho
IBHAYIBHELI LITHI: “Uyoluthola ulwazi ngoNkulunkulu.”​—IzAga 2:5.
LOKHO OKUKUSHOYO: Ukuthola ukuthi uMdali ukhona kungakusiza uthole izimpendulo zemibuzo ebalulekile enjengokuthi: Iyini injongo yokuphila? Kungani kunokuhlupheka okungaka? Kwenzekani uma sifa? Ungathola izimpendulo ezanelisayo eBhayibhelini.
Uzoba nethemba lokuba nekusasa elihle
IBHAYIBHELI LITHI: “‘Ngikwazi kahle engikucabangayo ngani,’ kusho uJehova, ‘ngizoninika ukuthula, hhayi inhlekelele, ukuze nibe nekusasa elihle nethemba.’”​—Jeremiya 29:11.
Buka ividiyo ethi Singaqiniseka Kanjani Ukuthi IBhayibheli Liyiqiniso? nethi Ubani Umlobi WeBhayibheli? atholakala ku-jw.org/zu. La mavidiyo ungawathola ngokubhala ebhokisini lokucinga amagama athi “iBhayibheli liyiqiniso” noma athi “umlobi weBhayibheli.”
LOKHO OKUKUSHOYO: UNkulunkulu uthembisa ukuthi esikhathini esizayo uzoqeda ububi, ukuhlupheka ngisho nokufa. Uma uzethemba izithembiso zikaNkulunkulu, ithemba lokuba nekusasa elihle lizokusiza ubhekane nezinkinga zosuku ngalunye ngesibindi.
Indlela abanye abazuze ngayo ngokukholelwa kuMdali
“Ngihlale ngimangala uma ngibona izindlela eziningi uNkulunkulu asisiza ngazo ekuphileni. Kusukela ekuhleleni izinto eziza kuqala ekuphileni kuya ekuxazululeni ukungezwani nabanye nasekubeni umngani kaNkulunkulu.”​—UCyndi wase-U.S.A.
“Ukukholelwa kuMdali kwenza ukuphila kwami kwanelise futhi kujabulise. Njengoba ngikholelwa kuNkulunkulu akwenzeki ngibe nesizungu. Ngihlale nginokuningi engingakufunda ngaye, ngendalo yakhe nangeZwi lakhe.”​—U-Elise waseFrance.
“Ukusebenzisa lokho uMdali wethu asifundisa khona eBhayibheli kungenza ngibe umuntu ojabule kakhudlwana. Kungisiza ngingabi umuntu ogxekayo, ngilalelisise futhi nganeliseke. Kungisize nokuba ngibe ubaba omuhle.”​—UPeter waseNetherlands.
“Engangikwenza nje ukudla, ukulala nokuzabalazela ukufika ngesikhathi emsebenzini. Ngangingakujabuleli nhlobo ukuphila! Manje ukuphila ngikubheka njengesipho esiyigugu kakhulu okufanele ngisijabulele.”​—ULiz wase-Estonia.
“Ngiwumuntu osheshe akhathazeke. Kodwa ukwazi ukuthi ububi, ukungabi nabulungisa nokuhlupheka kuzophela, kungenza ngikwazi ukubhekana nokukhathazeka.”​—U-Adrien waseFrance.
Thola ukuthi iBhayibheli liyiphendula kanjani imibuzo ebalulekile ephathelene nokuphila. Buka ividiyo ethi Kungani Kufanele Utadishe IBhayibheli?​—Ephelele.
Indlela Yokuthola Injabulo​​—⁠Ukwazi Ukuthi Uphilelani
Ukuthola izimpendulo zemibuzo ebalulekile ekuphileni kubalulekile ukuze sijabule.
Thumelela Thumelela Okwenza Kubaluleke Ukuthola Ukuthi Ukhona Yini UMdali
Okwenza Kubaluleke Ukuthi Uyakholelwa Yini KuMdali Noma Cha
g21 No. 3 kk. 14-15